प्रचण्ड र नेपालको डेन्जर खेलले ओलीलाई तनाब, बहुमतले नै हटाउने अन्तिम तयारी ! - Media Dabali
प्रचण्ड र नेपालको डेन्जर खेलले ओलीलाई तनाब, बहुमतले नै हटाउने अन्तिम तयारी !
काठमाडौं - सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद पेचिलो बन्ने देखिएको छ । विवाद उग्र बन्दै जाँदा दुवै पक्ष आ–आफ्नो रणनीतिमा जुटेका छन् ।
मुख्य सचिव, ३ राजदूत नियुक्तिदेखि ३ मन्त्रीको नियुक्तिसम्म आउँदा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतका नेता प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् ।
विष्णु पौडेल संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन र स्थायी समिति बैठकले सहमतिका आधारमा अघि बढ्न सुझाएकोमा ओली स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढेको प्रचण्ड–माधव समूहको आरोप छ ।
प्रधानमन्त्री ओली विगतका सहमति र निर्णय पन्छाएर अघि बढेकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउनु पर्ने मत नेकपाका कतिपय नेताले राख्न थालेका छन् ।
यद्यपि, प्रचण्ड–माधव तत्काल त्यस्तो मनस्थितिमा नपुगेको बताइएको छ । बरु, चाँडोभन्दा चाँडो सचिवालय बैठक बोलाउने तयारीमा प्रचण्ड–माधव समूह जुटेका छन् ।
स्रोतका अनुसार स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बहुमतबाट निर्णय गराएर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अघि बढ्ने मनस्थितिमा प्रचण्ड र माधव समूह रहेको स्रोतको दावी छ । नेकपाले यसअघि कात्तिक १५ देखि १७ गतेसम्म केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको थियो ।
तर कोरोना महामारीलाई देखाउँदै त्यसलाई १ महिना पर सारिएको छ । स्थायी समिति बैठक भने डेढ महिनाअघि मात्र बसेको थियो । ‘प्रचण्ड–माधव समूह ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्रिय बनेको सूचना कतिपयले प्रवाह गरे पनि उहाँहरू त्यसो नगरी स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा बहुमतबाट निर्णय गरेर ओलीविरुद्ध अघि बढ्ने तयारीमा हुनुहुन्छ,’ नेकपाका एक नेताले भने ।
नेकपामा विवाद बढेपछि ओलीले प्रचण्डलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् । तर भेटका लागि उनी तयार भएका छैनन् । केही दिनयता ओलीले प्रचण्डलाई छलफलका लागि तारन्तार बोलाए पनि नगएको बताइन्छ ।
स्रोतका अनुसार, प्रचण्ड एक्काएक्लै भेट नगर्ने पक्षमा छन् । यसअघिका भेटमा भएका सहमतिहरू प्रधानमन्त्रीबाट पालना नभएकाले प्रचण्ड एक्लाएक्लै संवाद गर्न हच्किएको बताइन्छ । साँघु साप्ताहिक